5 Enamandla Re: Abadali bacaphuna ama-Anime Fans Azothanda - Okunye
5 Ye-Best Re: Abadali Ama-Anime Quotes Ongafunda Kuwo
Izinhlamvu zabadali okushiwo kulokhu okuthunyelwe:
Nazi izifundo ezi-5 zokuphila ongazifunda kusilinganiso ngasinye se-ReCreators!
Izilinganiso ze-Rui Kanoya # 1
“Sota, dala izinto kuphela ongazidala. Esikhundleni sokukhala ngokudlule, kungcono ukudala. Yakha kakhudlwana, akunjalo? ' - URui Kanoya
Isikhathi esedlule sihlala sibuhlungu, ngoba ubuhlungu empilweni yinto esingenakukugwema, kepha singanquma ukuthi yini okufanele siyenze nokuthi sizoyaphi nobuhlungu noma ngaphandle kobuhlungu, noma ngaphandle kwalezo zinkumbulo ezidabukisayo.
Ekuqaleni kosuku ngalunye sinikezwa ithuba lokuthi sithuthuke kancane, sakhele okuthile ezimpilweni zethu.
Masikuthathe futhi samukele konke ebesikuphila, ukuze sakhe ikusasa lethu.
Izilinganiso zikaRui Kanoya # 2
“Ngiyakuqonda ukuthi izwe elixakile leli. Ngiyazi ukuthi akulona izwe lapho konke okufisayo kuzogcwaliseka khona. Kepha abalingiswa abanjengami abavela ezindabeni, izinhloso zethu sezivele sezinqunyiwe futhi ngeke sizibalekele. Ngokungafani nathi, nina bafana ninganquma ukuthi niyaphi nina ninodwa. Kungase kungabi lula kepha ungayikhetha bese uzakhela yona. Ungazibhalela owakho udaba nje. ” - URui Kanoya
Uma kunamandla amakhulu wonke umuntu anawo, kungamandla okukhetha.
Ukunquma ukuthi sizokwenzani ngezimpilo zethu esinyathelweni ngasinye esihambayo.
Izindaba zikhombisa impilo yomuntu, inganekwane ayilutho ngaphandle kwezinto ezijwayelekile ezikhulunywe ngendlela ebabazekayo futhi emnandi, izifundo zokuphila nezilo kanye nezilo.
Yonke impilo iyindaba, wena mngani wami, ngenkathi ufunda lokhu, uyingxenye yendaba.
Uyiqhawe, uyiqhawe elimangalisayo, ngoba unganquma ukuthi ufunani ekhasini elilandelayo encwadini yempilo yakho.
Alicetaria February Quotes #3
Kulomhlaba, ngihlangane nomfana ofunde udaba lwami, lo owamdala. Umhlaba wami onesihogo yindaba engajabulisi, kepha ufundisa abantu kulo mhlaba ngamandla, isibindi, nokuthi ubulungiswa kufanele benziwe kanjani. Yilokho angitshele khona. ” - Alicetaria Februwari
Izindaba ziqondwa ikakhulu njengomthombo wokuzijabulisa, lokhu akulona iphutha kepha kuyingxenye nje yawo.
Izindaba ziyindlela yasendulo thina bantu okufanele sixhumane ngayo,
kuyindlela yokwakha isiteshi sokuxhumana, ukudlulisa ulwazi, ukutshela othile okuthile ngakho-ke kwakha isipiliyoni.
Izindaba zingaba namandla amakhulu empilweni yakho, ngicabanga ukuthi singazisebenzisela okuthile okuhle.
Izilinganiso zeMeteora Austria # 4
“Umhlaba udinga ukukhetha nokuzimisela. Yamukela futhi ubhekane nakho. ” - UMeteora Österreich
Ukukhetha ukubhekana nempilo uqobo. Kuthatha isondo ulwele okufunayo, kepha lokhu kudinga ukuxazululwa.
Sizithola sivame ukuma ezindaweni esingathandi ukuba kuzo, siphupha ngokushintsha kepha asinakulindela ukuthi noma yini izoshintsha uma singathathi izinyathelo… Kepha kuyasethusa, futhi lokho kuvamile.
Kepha nginezindaba ezinhle kuwe: Ungaqhubekela phambili noma ngabe usasaba, kwamukele nje, wamukele ukukhetha kwakho, imiphumela, ukwesaba nenjabulo.
Izwe lidinga ukukhetha nokulungiswa, likwamukele, libhekane nakho, futhi liqhubekele phambili.
Izilinganiso zikaMamika Kirameki # 5
“Emhlabeni wami, ukukholelwa ezintweni yikhona okunginike amandla. Kepha le ndawo ingahluka. Ukukholelwa entweni ethile kungaba yisiphukuphuku. Kepha ezinye izinto zingaxazululwa ngokukholwa. Ukwenza lokho akusona isiphukuphuku kulo mhlaba futhi. Ngifuna ukukukholwa lokhu. ” - Mamika Kirameki
Ukukholelwa entweni ethile kubalulekile empilweni.
kunikeza ukwakheka ezimpilweni zethu futhi kusishukumisele ukuba sithuthe. Ukukholelwa kudlula indaba yamanga neqiniso.
kungamandla omlingo ngaphakathi kwethu asivumela ukuthi sithole amandla lapho sibuthakathaka futhi siholele umkhumbi wezimpilo zethu ukuya noma yikuphi lapho sifuna ukuya khona.
Lezi yizifundo zempilo engizithathile kulezi 5 Re: izingcaphuno zabadali.
I-Re: abadali igcwele izifundo ezinhle kakhulu zempilo nezingcaphuno ngakho-ke ngicabanga ukuthi sizobona ingxenye 2.
Ngicela uphawule futhi ungitshele uma ngabe okuthile lapha kukwenze wacabanga noma wezwa okuthile.
Izifundo Ezi-5 Zomsila Wempilo Ezikhuthazayo
Izifundo Zami Zokuphila Zamaqhawe Ezizokwenza Umuntu Oncono